CAYAARAHA | Bakool.net | Page 4
Juventus oo heshiis la gaartay tababare Pep Guardiola waa kuma qofka xogtaan daaha ka rogay?
Macalin Pep Guardiola ayaa heshiis la gaaray kooxda Juventus si uu xagaagan hogaanka Marwada duqda ah kala wareego tababare Maxi Allegri oo dhawaan shaaca ka qaaday inuu maamulka kubada cagta ku daalay oo uu nasiino u baahan yahay. Joornaalistaha caanka ah Luigi Guelpa ee xaruntiisa magaalada Turin tahay lana shaqeeyo wargeska Il Giornale ayaa shaaca ka qaaday heshiiska uu Guardiola la ...
Sadio Mane oo sheegay inuu sugi la’yahay kor u qaadistay Horyaalka Premier League.
Laacibka kooxda kubadda cagta Liverpool iyo qaranka Senegal Sadio Mane ayaa sheegay inuusan sugi Karin inuu arko asigoo horyaalka aduunka ugu xamaasada badan kor u haya. Mane oo kamid ah xidigaha ugu muhiimsan ee uu macalin Klopp ku tashto ayaa yiri; “ Ma sugi karo intaan koobka kala guuleysanaayo Liverpool, waan ogahay in taageerayaasha ay sideena oo kale nala riyoonayaan ...
xiriirka Kubadda cagta aduunka ee FIFA oo soo diiday rafcaankii ay Chelsea ka qaadatay ganaaxii la saaray.
Kooxda kubadda cagta Chelsea oo dhawaan uu xiriirka kubadda cagta aduunka ganaaxay kadib markii ay jabiyeen sharciyada FIFA ee heshiisyada da’yarta ayaa rafcaan ka qaadatay ganaaxaasi iyagoo ku hanweynaa in FIFA ka aqbali doonto. Xiriirka kubadda cagta aduunka ee markii lasoo gaabiyo loo yaqaano FIFA ayaa kooxda kubadda cagta ee Chelsea ka ganaaxay labo suuq kala iibsi ineysan wax cayaartooy ...
Xidhiidhka Kubbada Cagta Yurub Ee UEFA Oo Si Rasmi Ah Dacwad Ugu Soo Oogay Man City Iyo Ciqaab Adag Oo Ay Mutaysan Karaan.
Xidhiidhka kubbada cagta Yurub ee UEFA ayaa hadda si rasmi ugu dhawaaqay in ay baadhitaan ku bilaabeen kooxda Manchester City waxaana lagu soo oogay dawcad sabab u noqon karta in Sky Blues ay mari karto ciqaab adag. Xidhiidhka kubbada cagta Yurub ayaa ku dhawaaqay in Man City lagu soo dacweeyay in ay jabiyeen sharciga dhaqaale wanaaga Yurub ee Financial Fair Play. ...
Kooxda Kubadda cagta ee Ajax oo mucjiso sameysay tartanka Horyaalada Yurubna ka reebtay kooxda Real Madrid xili Spursna meel uga soo jeesatay Dortmund.
Qofna ma maleysan Karin kooxda kubadda cagta Ajax Amsterdam ay 1-4 ku garaaci doonto kooxda Real Madrid waliba ayadoo gurigeeda Bernabu ku cayaareyso. Footballka inta aad daawaneyso waxkasta waa ka macquul waxaana caawo goob joog u aheyn mid kamid ah kulamadii ugu yaabka badnaa ee kubadda cagta ka dhacay kadib markii kooxda Real Madrid isaga hartay tartanka Uefa Champions League ...
Liverpool Oo Barbaro Niyadjab Leh La Soo Gashay Everton, Man City Oo Hogaanka Premier League La Wareegtay
Liverpool ayaa barbaro niyadjab leh la soo gashay kooxda ay dariska yihiin ee Everton waxayna Liverpool iska qasaarisay fursada ay ugu soo laaban kartay hogaaminta Premier league laakiin Manchester City ayaa heshay fursada ay baaqi ugu sii ahaan doonto hogaaminta Premier league. Mohamed Salah ayaa lumiyay fursadihii ugu fiicnaa ee gool dhalineed ee ay Liverpool heshay waxayna hadda Reds yeelatay ...
Wasiirka Arrimaha Dibadda XFS oo ugu baaqay Wadamada Islaamka inay taageeraan deyn cafinta Soomaaliya
Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga, Mudane Danjire Axmed Ciise Cawad, ayaa ka jeediyay khudbad kulanka 46,aad ee Golaha Wasiirrada Wadamada xubnaha ka ah Ururka Islaamka oo shalay oo Jimce ahayd ka furmay Caasimadda Isutagga Imaaraatka Carabta ee Abu Dhabi. Wasiirka ayaa carabka ku adkeeyay in Soomaaliya ay had iyo jeer abaal u heyso Ururka Iskaashiga Islaamka sababo ku aaddan ...
Barcelona oo guushii labaad oo xiriir ah ka gaartay Real Madrid hogaankana xajisatay.
Kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa guul muhiim ah ka gaartay kooxda ay sida ba’an u xifaaltamaan ee Real Madrid cayaar aan waxba la isku reeban. Real Madrid oo arbacadii gurigeeda 3-0 looga soo badiyay isla markaasna looga ciribtiray Cope Del Rey ayaa dooneysay iney ka aargutaan dhigeeda Barce isla markaasna horyaalka mid furan ka dhigaan. Cayaarta ayaa qeybtii hore ...
Spurs iyo Arsenal oo isku garab dhaceen kulan Ramsey iyo Kane shabaqa gaareen halka Aubameyang rigoore qasaariyay sidoo kalena Torreira casaan la siiyay!
Kulankan adag ee garoonka Wembley ka dhacay cayaarta qaybteeda hore ama xili hore waxaa Spurs gool kaga naxsaday Ramsey daqiiqadii 16-aad waxaana goolkan oo weerar celis ahaa caawinaad ka geestay Lacazette ayadoo Ramsey oo dhexda ka qaatay kubada kadibna u gooyay goolhaye Lloris shabaqana kubada ku hubsaday. Spurs fursado badan ayay qaybta hore sameeyeen waxaana la hilmaami karin goolhaye Leno ...
Hordhaca : Tottenham Vs Arsenal: Gunners Oo Doonaysa Inay Soo Yareeso Farqiga Dhibcaha U Dhaxeeya Kooxda Tottenham
Wembley Stadium, London – Arsenal ayaa fursad u leh inay soo yareeyaan farqiga dhibcaha ee dhaxeeya deriskooda Tottenham Hotspur iyagoo maanta doonayaan inay farqigaas ay ka dhigaan kaliya hal dhibic markii ay booqanayaan garoonka Wembley horyaalka Premier League. Gunners ayaa ku soo laabatay kaalinta afaraad iyadoo leh guuleysatay shan kulan lix kulan ugu dambeesay Premier League sidoo kale Arsenal ayaa ...